Kungenzeka yini ukwenza esifubeni X-ray kanye umdlezane zingadla umntanakhe?
Muva nje, abesifazane abaningi ukhetha ukuncelisa ibele njengoba nje ukudla kweqiniso okunye for ezisanda kuzalwa. Ukunqatshwa amamiksi futhi amabhodlela nakanjani kuholela kwezithibelo ezithile, okumelwe ukuhlola umama omncane wengane. Akuyona indaba yokuthi nje kokushintsha indlela adla futhi isidingo ukulandela ukudla. Ngo esezele ngezinsuku zokuqala owesifazane lapho ubhekene nesinqumo esinzima. Noma ukungamukeli labo noma ezinye izidakamizwa, kungakhathaliseki ukuthi ukulimaza umntanakhe? Nini Ngingaya ukubuyela ezemidlalo ngaphandle umonakalo empilweni? Ngingaba ukudlula fluorography umdlezane?
Impendulo yombuzo wokugcina ekukhathaza zonke owesifazane ondodana lokuzalwa senzeka esibhedlela ezikhethekile. Ngo amahora okuqala angu-lapho kuqala ingane ozalwa abesifazane lapho bebeletha ithunyelwa ukuthatha esifubeni X-ray. Kuphephile nosana, futhi kubalulekile ukuba silifunde?
Le ndlela ingenye ezivame kakhulu ukuze kuhlonzwe izifo zokuphefumula. Fluorography kuyinto luhlolo wamaphaphu usebenzisa ama-X ray. Kulokhu, kwesikrini ubonisa isithombe lapho udokotela uzama ukuthola ezihlukahlukene ukwenqatshwa. Umbuzo ka-ukuthi kungenzeka ukwenza esifubeni X-ray umdlezane, ulungisiswe. Phakathi kwezinye abacwaningi owesifazane ethola umthamo ngemisebe (mSv 0.03 0.5 kuncike kudivayisi). Abaningi besaba ukuthi kuzichaya kungathikameza kabi isimo ezisanda kuzalwa. Isifiso ukuvikela ingane yakho bathambekele yimuphi umama, ngakho abanye abesifazane senqabe luhlolo, engozini impilo yabo. Ake sihlole kabanzi ukuthi lezi ukwesaba kuyafaneleka.
Photoroentgenography lactating omama: kungani idingeka?
Izifo eziningi umgudu wokuphefumula , kuba lula kakhulu ukuthola kusaqalwa esingayenza ngaphandle kokuthi siphathe imiphumela kanye nezinkinga. Kulokhu, usizo eza fluoroscopy, okuvumela imizuzu embalwa ukuze uthole ulwazi mayelana nesimo se-mediastinum. Kuyinto ngokuyinhloko mayelana isifo sofuba, kanye nezinye izinhlobo umdlavuza wamaphaphu. Ngeshwa, omama abasebancane abavikelwe kusukela ekuthuthukiseni lezi zifo yingozi. Fluoroscopy ngesikhathi lactation okuboniswe kulezi zimo ezilandelayo:
uxhumane ne-TB e ezinyangeni eziyisithupha ezedlule;
omuhle Mantoux test abantu nesimo esiphuthumayo;
Kuhlala ekhatsi esifundeni ezinezinga eliphezulu legciwane isifo sofuba.
Uma noma iyiphi yalezi izimo photoroentgenography umdlezane - ingozi kudingekile, okuyinto okufanele uhambe ngayo ngenxa impilo yabo futhi inhlalakahle ingane. I ngaphambili zokugula okufunwayo, aba maningi amathuba okuba umphumela ube yimpumelelo lesi sifo futhi mancane amathuba okuthi ukuthuthukisa eziyingozi.
Ukucabanga ukuthi kungenzeka ukwenza esifubeni umama X-ray ubuhlengikazi, abesifazane abaningi besaba imiphumela emibi emisebeni emzimbeni. Akuwona wonke umuntu uyazi ukuthi kunezinhlobo ezimbili amadivayisi ukuhlolwa: ifilimu futhi digital. Esimweni sokuqala izithombe ezilotshwe ngqo ifilimu, okwenza kwaba nzima ukuba ngandlela-thile ulungise umthamo ngemisebe wathola. amadivaysi Digital ukubonisa ulwazi esikrinini, abe sensitivity high futhi avumele ukusetshenziswa umthamo izikhathi 4-5 engezansi. Uma esicabanga ukuthi ingenzeka, omama lactating Kufanele kukhethwe ukhetho odlule.
Photoroentgenography umdlezane: Ingabe kukhona umonakalo?
Zama-X ray uhlobo ngemisebe, ngakho ukukhathazeka labesifazane isekelwe kahle. Enye into ukuthi umthamo ubuncane emisebeni esetshenziswa phakathi naleyo nqubo. Yilokho ngokwanele ukuba nemiphumela ebesiyilindele, kodwa azenele ngandlela-thile ukulimaza owesifazane noma ingane.
Ungenza esifubeni X-ray noma lactating Usekhona? Impendulo isobala yalo mbuzo akukakabi khona. Abanye ochwepheshe bakholelwa ukuthi umthamo encane kwama-X ray akakwazi kubangele izinkinga ezinkulu zempilo. Abanye baphikisa ngokuthi ukunakekelwa umdlezane kangcono wokuzikhuza iyiphi amathonya ukuthi ngandlela-thile kungathinta isimo komntanakhe. Noma yimuphi ucwaningo, obuphathekayo, hhayi eyenziwa ngale ndaba. Odokotela abaningi bakholelwa ukuthi photoroentgenography lactating omama kufanele kwenziwe ngaphansi izinkomba esiqinile futhi kuphela uma kunesidingo sangempela.
Indlela ukulungiselela luhlolo?
omama abasakhula nakho kakhulu, ngeke kuthinte ukuthi esifubeni X-ray izinga ubisi lwebele? Kuyinto ngokuvamile kungenzeka ukuzwa izincomo ukuthi kokubili uzotshala ngaphambi kokuhlolwa, futhi ngemva kwaso. Abanye ochwepheshe batusa ukuba ondle ingane izinsuku ezimbili. Ingabe kunjalo ngempela?
Ucwaningo lwamuva nje luye lwabonisa ukuthi akukho nomthelela obalulekile ikhwalithi inqubo, ubisi lwebele is hhayi waphawula. Ngisho njalo-x-reyi musa zibangele noma iyiphi nemiphumela emibi ngendlela efanayo. umdlezane asikho isidingo ukucwenga, kanye isitoko kwezinsuku ezimbalwa. Abukho ubufakazi obungokwesayensi nomthelela omubi ikhwalithi x-ray of ubisi lwebele alikho.
Lapho kungenzeka ukondla ingane ngemuva kokubhala isivivinyo?
Mhlawumbe lo mbuzo ekujabulisayo yilowo nalowo wesifazane oweza yezizathu ezithile ukuthatha isithombe emaphashini. Ungakwazi ukondla ingane ngemuva x-ray noma cha? Njengoba sazi ukuthi ukuchayeka phakathi naleyo nqubo akuphazamisi izinga ubisi ukunikeza ingane ebeleni kungaba ngokushesha ngemva kovivinyo.
Khuthaza ingane uzwakalise ubisi yakho akwenzi mqondo, njengoba yokudla kokweqa. Ngisho ukusetshenziswa ibhodlela elilodwa kungaholela ukwenqaba isifuba futhi kwathatha okulandelayo yokudla yokufakelwa. Lokhu kuyingozi ikakhulukazi esikhathini ezisanda kubelethwa, lapho lactation Kumiswa kuphela futhi noma yikuphi ukuphazamiseka enqubeni kungaba yingozi. Akubalulekile ukuhlola okunjalo futhi eneminyaka engu-izinyanga ezintathu noma ezine, izingane eziningi lapho zidlule esigabeni ukungamukeleki zamanga webele. Ukubukeka ibhodlela lobisi okukhulunywa kuphela isimo sibe sibi isimo, okuholela ukumisa okungadingekile ibele.
Ngo esezele ingane omama abasebasha ebhekene isidingo izinsuku ngowokuqala ekuhlolweni ukukhanya. Bafuna ukusebenzisa ezinye odokotela ke, esongela kungenjalo angeke kokukhishwa esibhedlela. Ngisanda ezele owesifazane, engazi ukuthi kungenzeka ukwenza esifubeni umama X-ray ubuhlengikazi, idabukile phakathi ukwenqena ukushiya ingane esigcemeni ngaphandle kwesiqondiso futhi kudingeka ukuba agcwalise kadokotela we odokotela. Indlela kulokhu?
Okokuqala kumele wazi ukuthi luhlolo wamaphaphu - ngokuzithandela, futhi akukho muntu ongathi ukuphoqa umama osemusha ukwenza esifubeni X-ray ngaphandle kwemvume yakhe. Uma owesifazane akafuni ukuba ibhekane inqubo, kubalulekile ukubhala ukwenqaba ukuxilongwa ngendlela enqunyiwe. Ifomu onesiginesha lesiguli unamathele umlando sifo, ngemva kwalokho lona wesifazane ngokuphepha emuva lesigceme. On the inqubo osenyameni alithintwa - kungekho ezinye izizathu ezinhle odokotela abanayo ilungelo sikulibazise isiguli esibhedlela. Nge ukudlula ngihlolwa emtholampilo inqubo ukwenqaba yezingane kumele okuphindaphindiwe.
Efingqa, kufanele ugxile la maqiniso alandelayo:
X-reyi yesifuba - lokhu kuyindlela esheshayo futhi ophephile ukuba kusenesikhathi sofuba kanye nezinye izifo eziyingozi kwamaphaphu. Kukhona amacala lapho ke akudingekile ukuba senqabe kusukela lolucwaningo.
-X-ray ngemisebe akunamthelela izinga ubisi lwebele. Bancelise ngemva fluoroscopy kungenzeka ngaphandle kokuphazamiseka. Ukucwenga nobisi esitolo ukuze zisetshenziswe esikhathini esizayo akwenzi mqondo.
Nganoma yisiphi isikhathi (kufaka phakathi kokuhlala esibhedlela) umdlezane kungaba zaba enza fluoroscopy. It akuphazamisi izinga lezempilo.
Ezibuza ukuthi kungenzeka ukwenza esifubeni X-ray ukufukamela, abesifazane abaningi afune usizo muva zilethwe abangane bakhe, omakhelwane, noma ezama ukuthola ukwaziswa okukuyi-Internet. Kubalulekile nokukhumbula ukuthi isimo zingase zihluke. Lapho umama osemusha ebingayenza ngaphandle inhlolovo, ezinye zingase zibe sengozini sokuthuthukiswa sofuba kanye nezinye izifo. Uma kunoma iyiphi singabaze kunengqondo ubonane nodokotela. Kuvele udokotela abanolwazi uzokwazi angasusa noma yikuphi ukungabaza ukusiza owesifazane ibele ukuthola okuhle kakhulu kuzo zonke izimo.
Echocardiography Transesophageal: kuyini?
Uric acid egazini ancipha: Izimbangela Nezingozi Izimpawu
Izindlela, izinkomba kanye contraindications for UFO Bloods
Ukwelashwa nokuvikelwa umkhuhlane e ingane
Uchwepheshe wezokudla engcono Petersburg: ukubuyekezwa. Ngubani izazi zokudla umhlabeleli Petersburg?
Yini ukugibela nendlela ukupheka?
I-candy bar yokugubha ngezandla zakho
Izikhalo kuMongameli weRussian Federation. Isikhalazo ku-Administration of the President of the Russian Federation
Pluto e Scorpio: isici
Voltage isimame: kudivayisi wesifunda kanye nokusebenza
Thina ukubabela ekahle: ukuthi ukudlukuza izinwele?
Lactase ukuntula ezinsaneni: izimpawu kanye nokwelashwa
Kuyini ukukhwehlela whooping? Izimbangela, Izimpawu kanye Ukwelashwa Izindlela
Apitonus Abkhazia presents uju ehlukile impilo yethu